Kungenzeka yini ukuba iqhwa anyanisi oluhlaza ebusika? Lo mbuzo wabuzwa besifazane abaningi. Phela, ukuthola umkhiqizo elimnandi futhi zemvelo kunzima in the nobusika. Ngakho-ke, kungcono ukuvuna ehlobo. Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela ukwenza lokhu kahle, sizokutshela esihlokweni samanje.
Ngaphambi kokuba siphendule umbuzo ukuthi kungenzeka ukuba iqhwa , anyanisi oluhlaza kufanele ukusho ukuthi izakhiwo lo mkhiqizo.
Akusiyo imfihlo ukuthi izimpaphe anyanisi bayakwazi ukuvikela umzimba ezifweni ezihlukahlukene futhi izifo ezibangelwa amagciwane. Lokhu kungenzeka ngenxa yokuba khona kuwo zokukhiqiza oluyingozi. Yingakho izazi eziningi ngesikhathi ukusabalala asebenzayo Umkhuhlane ne-acute nezifo zokuphefumula avame Kunconywa ukusebenzisa isaladi nge anyanisi oluhlaza.
Futhi kulo mkhiqizo liqukethe ane-chlorophyll, kudlala indima enkulu e inqubo hematopoiesis.
Kungenzeka yini ukuba iqhwa oluhlaza onion-abhale? Yiqiniso, unga. Ngaphezu kwalokho, le ndlela yokwelapha akuphazamisi izakhiwo umkhiqizo. Ngemva incibilikiswa, kukhona yonke amavithamini afana nawokuqala okokuqandisa:
B amavithamini, okuyinto ziwusizo kakhulu umsebenzi HC kanye nobuchopho. Ikakhulukazi, uvithamini B1 elawula asidi zomzimba womuntu futhi ukhuthaza ukuzinza cholesterol, futhi vitamin B5 kuthuthukisa umzimba amaphrotheni, amafutha kanye carbohydrate.
Vitamin A kuyinto ngokuzimisela redox izinqubo. Futhi kubalulekile ukwandisa ukukhula amangqamuzana amasha futhi umzimba.
U-vitamin C ehilelekile zonke izinqubo emzimbeni.
Vitamin E is a antioxidant enamandla, okuyinto kahle ithinta umsebenzi womuntu zokuzala. Futhi, lesi sici ngcono isimo isikhumba, izinwele nezinzipho.
Kungenzeka yini ukuba iqhwa chives nalapho kungcono ukuyenza? Ngokuqinisekile sonke siyazi ukuthi oluhlaza enjalo uqala uvuthwe in the imibhede phakathi May. Kwakuphakathi nalesi sikhathi sonyaka onion eluhlaza has a umsungulo akhethekile juiciness. I abasha imifino eziningi izakhi ezibalulekile ukuze umzimba womuntu.
Ngakho, ukuqoqa izimpaphe ukukhothamela okokuqandisa kwalo okwalandela kangcono entwasahlobo, lapho izandla ingafinyeleleki ukuphakama kwalo esiphezulu ningabi eqinile.
Kungenzeka yini ukuba iqhwa chives endaweni yonke? Yiqiniso, unga. Ukuze wenze lokhu ilungelo lakhe izinyembezi impande, bese izimpaphe ngobumnene ihlanzekile indawo kanye emaphethelweni. inqubo okunjalo ngeke kugcine kuhlanzwe Isiqu aluhlaza, kodwa ayizange ithole isiphunzi namandla.
Uma ungenalo isikhathi ukuqoqa anyanisi oluhlaza phakathi May noma ekuqaleni kuka-June, kungcono likhiphe ngaphandle impande, njengoba kuba okukhulu kakade. Ukuze okwalandela okokuqandisa amapeni kufanele ukhiphe ngokucophelela kusukela base, noma nge-sikelo.
Kungenzeka yini ukuba iqhwa anyanisi oluhlaza esiqandisini? Ukuze umkhiqizo ezifana aye wasigcina zonke izimfanelo zayo eziwusizo isikhathi eside, akufanele agcinwe egumbini esiqandisini phezu 5-9 izinsuku. Uma kungenjalo, nje obmyaknet futhi ichithekile. Beka anyanisi oluhlaza isikhathi eside kuphela efrijini.
Ngakho, indlela efanele ulungiselele umkhiqizo okokuqandisa okwengeziwe? izimpaphe Okokuqala kumele ngokucophelela wahlola ngokuba khona izimpethu udoti. Umkhiqizo eminye edingekayo emanzini abandayo bese ushiye njengoba enjalo for isigamu sehora.
Uma anyanisi cwilisa, kufanele siyakazwe kahle. Uma ayemazi obudinekile ne namahlumela kuyo le mpande, ziwashwa kubalulekile ukudalula ingxenye yayo basal, ngoba ke aqoqana semali udoti.
Uma unquma ukusebenzisa kuphela izimpaphe ke kugeze ngokwanele, ukuthatha amathiphu ezingadingekile.
Ngokushesha nje lapho amahlamvu icutshungulwe, kufanele kube omile kancane. Ngenxa yale njongo anyanisi kahle shake phezu echibini, bese ngelulela ithawula elikhulu. Ngenxa yalokho, umkhiqizo ubanjwe amahora ambalwa, okungukuthi, inqobo nje akaphelelwa zonke umswakama.
Kungenzeka yini ukuba iqhwa anyanisi oluhlaza efrijini? Kungenzeka, kodwa kuphela uma yonkhe imitsetfo ledzingekako.
Mayelana nendlela kahle ukulungiselela lo mkhiqizo, we thasisela ngenhla. Nokho, ngemva kwalokho kudingeka unqume ngqo ukuthi ngeke ke ukumisa. Abanye besifazane uncamela ukuvuna anyanisi oluhlaza ebusika ngesimo iyonke, kodwa kukhona nalabo oyi-oqoshiwe kuye. Ake sixoxe ngezizathu izindlela kabanzi.
Kungenzeka yini ukuba iqhwa anyanisi oluhlaza efrijini sisonke?
Freeze scallions lonke kuthatha isikhathi esingaphansi Chop. Ukuze lo mkhiqizo iphathwa is wesula ngokucophelela usebenzisa usula, bese ngobumnene sandile izikhwama esikhethekile umnkantsha. Kulokhu, amaphakheji kungukuthi phama ngokugcwele. Chives akufanele ngayinyomfoza ngayiphosa. It is ngaphakathi ungqimba elincanyana esikhwameni, bese ulithumele efrijini.
Ngemva kokukhuthazelela imifino emakhazeni cishe ihora, ke wakhishwa futhi ngobumnene uphehle e ilungelo inqwaba e iphakethe. Khona-ke aphinde ithunyelwa gumbi umnkantsha futhi aqukethe kuwo isicelo ngqo.
Kungenzeka yini ukuba iqhwa anyanisi oluhlaza ngefomu oqoshiwe?
Ngokuvamile, le nkosikazi yesimanje simisiwe anyanisi oluhlaza ngefomu oqoshiwe. Phela, kulula kakhulu. Kungaba nje asuswe esikhwameni kanye inkathi ezinye ukudla. Kodwa indlela yokwenza onion Slip e eqandisiwe phansi futhi kulondolozwe ngendlela crumbly? Ukuze wenze lokhu, amakhambi okulungiselelwe kufanele kube kahle omile ithawula, bese nquma ku ukusika ebhodini. Okulandelayo, kumelwe ibekwe esikhwameni esikhulu plastic knock ku hhayi ungqimba obukhulu bafakwa efrijini kuze kuphele isigamu sehora. Njengoba isikhathi sihamba, umnsalo kufanele ayonyakaziswa futhi, wafaka ungqimba elincanyana bese uqhubeke okokuqandisa.
Lezo kuyinto efiselekayo ukuphinda izikhathi 4-5. Kuphela kuleli cala uthola omnandi anyanisi eqandisiwe.
Manje, niyazi, ukuthi kungenzeka ukuba iqhwa chives. Indlela yokukwenza kwesokudla, we thasisela ngenhla.
Ngokusho Izibuyekezo emizi esitolo umkhiqizo okunjalo kungaba isikhathi esingangonyaka efrijini. Ngokuvamile, it is esetshenziswa ukulungiselela izitsha lokuqala nelesibili. anyanisi oqotshiwe umane asuswe esikhwameni bese uyifaka kwi-isitshulu noma isobho. Uma iye simisiwe ngesimo iyonke, pre-cut yayo.
abapheki futhi baphikisa ngokuthi umkhiqizo ezifana kungaba ukungezwa salads ehlukahlukene. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi ngemva incibilikiswa kuba Limp futhi ulahlekelwe ukubonakala kwawo enhle. Nakuba izakhiwo ezuzisayo anyanisi ziyafana.
I ukuma lamafutha esundu, ikakhulukazi ekukhiqizeni, ukusetshenziswa kanye umonakalo
Lochia ngemva kokubeletha: kuyini?
Fire - iphupho nencazelo, iphupho nencazo
Lapho ungakwazi ukubhukuda eYekaterinburg nasezindaweni ezizungezile